"Nwoke nzuzu" Na - ewepụta Trailer ọhụrụ - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ "Nwoke nke na-enweghị isi" na-ewepụta trailer ọhụrụ
"Nwoke nke na-enweghị isi" na-ewepụta trailer ọhụrụ
edere ya Waylon Jordan January 3, 2018
Ihe niile malitere site na a Creepypasta; mgbe ahụ ọ ghọrọ akụkọ ọdịnala nke n'ụzọ ụfọdụ sitere n'ike mmụọ nsọ mpụ na aha ya. Ikekwe, ọ bụ ihe dị mma na nwoke dị nro nke nwere ogologo ogologo, ogologo ahụ, enweghị ihu, yana ebumnuche enigmatic ga-achọta nnukwu ihuenyo ahụ.
Ọ bụghị ihe ijuanya na, na 2018 ga-ahụ onye a ma ama na-eme ihe nkiri Javier Kalama inye onyinye uwe ojii iji tụọ ndị nọ n'afọ iri na ụma ụjọ n'okpuru nduzi nke Sylvain White (Nọgide na Yard).
Botet sonyere Joey King (Nkwado) Julie Goldani Telles ("Bunheads"), Jaz Sinclair ()Mgbe Alaka Agbaji), na ọtụtụ ndị na-eto eto ndị ọzọ na-eme ihe nkiri dị ka ndị a kọrọ akụkọ ha, ma ugbu a, anyị nwere ụgbọala na-adọkpụ.
N'ịbụ ndị jupụtara na foto ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ na ọ dịkarịa ala otu ihe atụ nke mmerụ ahụ dị egwu, ụgbọala na-adọkpụ na-esetịpụrụ otu ọkụ mmụọ nke ihe nkiri. O doro anya na ọ ga-eme ka anyị nọdụ ala n’oche anyị ma payaa ntị.
Nwoke dị gịrịgịrị sill mee ka ụzọ ya banye n'ụlọ ihe nkiri Mee 18, 2018 na nkesa site na Sony Pictures. Lelee ụgbọala ahụ na-adọkpụ n'okpuru ma kwadebe onwe gị maka ịrị elu nke Slender Man!
Javier KalamaNwoke dị gịrịgịrịWaylon Jordan
Blumhouse 'Eziokwu ma ọ bụ Dare' Trailer na-ewere Egwuregwu Egwuregwu -N'ụzọ siri ike
[Teaser Trailer] 'Angel' - A New Horror-Thriller, Na-abịa Oge Na-adịghị anya.
Benny na-ejide onwe ya nke ọma na nanị 'Benny hụrụ n'anya ...
LEE: Julianne Moore bụ Magnetik na Mbụ 'Lisey's ...
Chọọ Cateories Họrọ Atiya Amazon (nkiri) (7) Amazon (usoro) (9) AppleTV + (2) Rgbọ mmiri Blu (4) Egwuregwu egwu (46) Na-akpa ọchị (12) Facebook (usoro) (1) Akụkọ ifo (32) Ihe osise (26) Gore (23) HBO (ihe nkiri) (4) HBO (usoro) (7) Akwụkwọ ụjọ (44) Akụkọ Ntụrụndụ Na-adịghị Egwu (10,482) Ihe nkiri egwu (180) Usoro ụjọ (52) Horror Subgenres (8) Hulu (usoro) (4) Ajụjụ ọnụ (nkiri) (32) Ajụjụ ọnụ (usoro) (2) LGBTQ ụjọ (29) Ndepụta (ihe nkiri) (37) Nsuso (usoro) (2) Ahịa (19) Nnukwu anụ mmiri (9) Nyocha Nyocha (42) Ihe nkiri (11) Egwu (35) Netflix (nkiri) (16) Netflix (usoro) (20) Na-abụghị akụkọ ifo (3) Paranormal (75) Ọrịa na-atụ ụjọ (thrillers) (52) Usoro nyocha (7) Shudder (nkiri) (39) Shudder (usoro) (15) Ebube (4) Iche na nke a na-adịghị ahụkebe (35) Ihe nkiri na-asọ asọ (49) Usoro gụgharia (17) Mụaka (2) Ihe nkiri (nkiri) (138) Trailer (usoro) (32) Ezi Mpụ (41) Egwuregwu vidio (165) YouTube (nkiri) (3) YouTube (usoro) (11)